Madaxwayne Gaas oo u safray Nairobi ayaa la waydiiyay sababta dagaal uu u dhaco isagoo maqan (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxwayne Gaas oo u safray Nairobi ayaa la waydiiyay sababta dagaal uu u dhaco isagoo maqan (dhegayso)
Oktoobar 3, 2018 10:27 b 0
Madaxwaynaha dowladda Puntalnd Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta u safray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya oo uu sheegay mashaariic inuu kala soo hadli doono Beesha Caalamka iyo hay’adaha halkaasi jooga.
Madaxwaynaha ayaa warbaahinta ay waydiisay khudbad uu laba bilood kahor ka jeediyay magaalada Brusless oo uu ku balanqaaday inuu soo celin doono gobolka Sool oo badankiisa Somaliland ay la wareegtay mudadii uu isagu xilka hayay, maadaama hadda oo maamulkiisa uu u haray boqol maalmood aanay jirin wax talaabo oo ay qaadeen.
Madaxwaynaha ayaa sidoo kalle la waydiiyay inay suurtagal tahay dalka dibadiisa isagoo ku maqan inuu dagaal dhaco sidii horay loogu bartay iyo sababaha kusoo beega, waxaana uu kaga jawaabay sidaan.
” Waxaa weye dagaalka bilowgiisa iyo dhamaadkiisa wakhtigiisa ayey leedahay anoo baxay hadii dagaal dhacay anigu kantarolkiisa ma lihi sababtu dhacay cidii u dhacay ayaa la waydinayaa marka howshaasi waa howl milatari waa howl gaar ah meeshana munaasib maba mahan in lagaga jawaabo suaalaha noocaas ah waa mahadsantihiin” ayuu yiri madaxwayne Gaas.
Sidoo kalle mar la waydiiyay maamaadama horay maamulkiisa uu usoo saaray inaan loo safrin magaalada Muqdisho, isaguna hadda uu sii marayo ayuu ku jawaabay Muqdisho inay tahay caasimaddii dalka oo aanay cidna ka xigin.